ဝိုင်ဒိုင်ယာမှ "သင်၏ဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်ရန် ၁၀၁ နည်းများ" Audiobook ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
အနည်းငယ် ဝိန်းဒိုင်ယာအသံသွင်းစာအုပ် ခေါင်းစဉ် သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်း ၁၀၁ ခု။ နားထောင်ရန်အလွန်ပေါ့ပါးသည်မှာ ၅၈ မိနစ်သာကြာသည်။
ဤစာအုပ်၏အမည်သည်သူ့ဟာသူပြောသော်၎င်းတွင်သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်း ၁၀၁ ပါရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤနည်းလမ်းများစွာကိုစာအုပ်တစ်လျှောက်လုံးထပ်ခါတလဲလဲထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်နေပုံရသော်လည်းနည်းလမ်း ၅၀ ဖြင့်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည်။
အတွက်စုဆောင်းဒီ audiobook ၏သုံးသပ်ချက်များ Goodreads.
* ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အသံအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ သင်၏ဘ ၀ ကိုမည်သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်သတိပေးချက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ မိနစ် ၆၀ လောက်မှာအရမ်းတိုတယ်။ ထပ်တလဲလဲနားထောင်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
* ဒီအော်ဒီယိုစာအုပ်ထဲမှာချစ်ခြင်း၊ သဟဇာတဖြစ်ခြင်း၊ ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘ ၀ မှာဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲ။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်သို့ရောက်ရှိရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်စာအုပ်သည်မြင့်မြတ်သောမိမိကိုယ်ကို၊ မြင့်မြတ်သောသြဇာ၊ တစ်ခါတစ်ရံ“ ဘုရားသခင်” အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ သင်၏ဝိညာဉ်ရေးယုံကြည်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ အနည်းငယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
* ကျွန်တော်နားထောင်ချင်တဲ့ audiobook ရဲ့ပုံစံမဟုတ်ပေမယ့်တကယ်ကိုစိတ်သက်သာရာရခဲ့တယ် နှင့်အချို့သောအရိုအသေအတွက်, ကုထုံး။
အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောဘ ၀ ကိုမည်သို့ပိုင်ဆိုင်ရမည်ကို၎င်းကသွန်သင်သည်။ ငါကကြယ်သုံးပွင့်မပေးဘူး။
* ဒါဟာကြားရတာကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလုပ်နိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောအတွေးအခေါ်များစွာရှိသည်။ “ လမ်းကြောင်း” တစ်ခုစီသည်တိုတောင်းသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်အသုံးချနိုင်သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအတွေးအခေါ်များဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့နွေးထွေးတဲ့အသံကိုငါကြားချင်တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုဘဝမှာအပြုသဘောဆက်ရှိစေဖို့ကူညီပေးတယ်။ ကားမောင်းနေစဉ်နားထောင်ရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » Audio » ဝိန်းဒိုင်ယာ၏ "သင်၏ဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်း ၁၀၁" Audiobook
Darlin Lightning ဟုသူကပြောသည်
Darlin Rayo အားပြန်ပြောပါ
Uriel Yorfie Chahua Huayta ဟုသူကပြောသည်
အားလုံး exlente အသံအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ် .. !!!!!
Uriel Yorfie Chahua Huayta ကိုပြန်ပြောပါ
ခရစ်စတီယာန် မာရီကာ ဟုသူကပြောသည်
Cristian Marica သို့ပြန်ပြောပါ
မာရီယာ Gabriela Santodomingo Peña ဟုသူကပြောသည်
Maria Gabriela Santodomingo Peñaအားစာပြန်ပါ
ငါဒီ Self- အကူအညီနှင့် Self- တိုးတက်မှုစာအုပ်များအလွန်စိတ်ဝင်စားတယ်
LokiiTo TiierNiito Gronex ဟုသူကပြောသည်
LokiiTo TiierNiito Gronex သို့ပြန်ပြောပါ
Sil Piñeiro ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်ကြားခဲ့ရသောအကောင်းဆုံးအသံ၊ ၎င်းကိုတင်ယူသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ 🙂ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။
Cristina မေ ဟုသူကပြောသည်
Cristina Mayo သို့ပြန်သွားပါ
Mario လာရာ ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းကောင်းတယ်၊ အဲဒါကမင်းကိုလျစ်လျူရှုထားတာတွေအများကြီးသင်ပေးတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
mario lara အားပြန်ကြားပါ
မင်းမှတ်ချက်ပေးတဲ့ Mario အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီနေရာမှာမင်းမှာ Audiobook အများကြီးအများကြီးရှိတယ် https://www.recursosdeautoayuda.com/los-mejores-libros-de-autoayuda/
odalys ခရုဇ် ဟုသူကပြောသည်
odalys cruz သို့ပြန်သွားရန်
ဟေး၊ ဘယ်သူ့ကိုသင့်ဘဝကို Wyne Dyer ကနေ PDF format နဲ့အသွင်ပြောင်းဖို့နည်းလမ်း ၁၀၁ နည်းရှိသလဲ။ ကျွန်တော်အဲဒီမှာချင်ပါတယ်